Sony Xperia Z အတွက် Sony Xperia Z Mod Pack Androidsis
ယနေ့တွင်သင့်အား Sony Xperia Z Pack ကို Xperia P. တွင်တပ်ဆင်ရန် AndroidsisaMod မှသင့်ကိုယူဆောင်လာပါမည်။ ဤ Mod ဖြင့် Sony Xperia Z နှင့် Sony ထုတ်လွှတ်သည့် Jelly Bean လုပ်ငန်းသုံးနှင့်လုပ်ဆောင်မှုအများစုကိုရရှိမည်ဖြစ်သည်။
သတ်မှတ်ရန်ပထမ ဦး ဆုံးအရာ, Mod ဆိုတာဘာလဲ။ Mods များသည်ကျွန်ုပ်တို့၏စမတ်ဖုန်းယူဆောင်လာသည့် application နှင့် interface များ၏မူကွဲပုံစံများဖြစ်သည်။ Android သည် open source ဖြစ်သောကြောင့်မည်သည့်ပရိုဂရမ်ကျွမ်းကျင်သူမှမဆို၎င်းကိုပြုပြင်ပြီးတိုးတက်မှုများကိုထည့်နိုင်သည်။
ဒီ Mod ဘာတိုးတက်လာသလဲ?
JB အိုင်ကွန်များနှင့်အတူ New Framework
Sony Xperia Z ၏အသွင်ကူးပြောင်းမှု
Jelly Bean ကိုစကားပြောသော V4
Sony Xperia Z နှင့် Jelly Bean ဖိုင်များ - SemcMusic.apk, SemcAlbum.apk, SemcVideo.apk, SemcPhone.apk
Sony Xperia Z အရင်းအမြစ်
Xperia Z စတိုင် SystemUI
Xperia Z ဂီတဝစ်ဂျက်
နောက်ဆုံးပေါ် JB အယ်လ်ဘမ်နှင့်ဗီဒီယို
အသေးစား App အတွက် Black Taskswitcher
ယင်းတို Xperia P ကို အမြစ်တွယ်နေတဲ့ပြန်လည်နာလန်ထူနှင့်အတူ
Sony Xperia Z MOD Pack ဖိုင်
အသေးစား Apps ဖိုင် 1
အသေးစား Apps ဖိုင် 2
Sony Xperia Z Mod Pack ဖိုင်နှင့်အသေးစားအက်ပ်ဖိုင်နှစ်ခုကိုကူးယူပါ
ကျွန်တော်တို့သည်သေးငယ်သည့်အက်ပလီကေးရှင်း၏ပထမအပိုင်းကို flash လုပ်ပြီးရှင်းလင်းသည့် cache ကိုပြုလုပ်သည်
pin code ၀ င်းဒိုးပေါ်လာသည်အထိကျွန်တော်တို့ restart လုပ်ပြီးစောင့်နေမည်
ဒုတိယအပိုင်းကို flash လုပ်ပြီး restart လုပ်ပါ
ယခုကျွန်ုပ်တို့ SDcard မှ Install Zip ကို install လုပ်ပြီး Sony Xperia Z ၏ Mod Pack ဖိုင်ကိုရှာတော့မည်
ပိုမိုသိရှိလိုပါက - သင်၏ Sony Xperia P ကို ​​root လုပ်ပါ
ဒေါင်းလုပ်များ - Sony Xperia Z Mod Pack ဖိုင်တွဲ
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » Sony က » Xperia P, Sony Xperia Z Mod Pack
ပြီးတော့ Xperia Acro S အတွက်ဒီလိုမျိုးလား။
Jelly bean ပါ ၀ င်သော Sony Xperia P အတွက်တရားဝင် update မထွက်သေးသလား။
developer များမှာလွန်ခဲ့သောတစ်ပတ်ကထက်နည်းသော bug များနှင့်ဗားရှင်းတစ်ခုရရှိခဲ့သော်လည်းမကြာမီထွက်ရှိသင့်သည်
Adrian dj jd ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ ဤအရာသည်စမတ်ဖုန်းကိုလုံး ၀ မသက်ရောက်ပါ။ အာမခံချက်သို့မဟုတ် jelly bean ကိုထွက်ပေါ်လာသည်နှင့်တရားဝင်မွမ်းမံရန်လိုအပ်ပါသလား။ ကြိုတင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ... oh နှင့်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါသေးငယ်သောအရာများကို flash လုပ်ရန်ပြောသောအခါညွှန်ကြားချက်တွင်လိုင်းထည့်ရန်လိုအပ်သည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်။ ၎င်းတွင် -> install zip from sdcard သို့မဟုတ်မ? ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
AdrianDj JD သို့စာပြန်ပါ
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်မေးခွန်းနောက်တစ်ကြိမ်ကျွန်ုပ်ဂျယ်လီစေ့သို့မွမ်းမံရန်သွားသောအခါ၎င်းသည်သက်ရောက်မှုရှိပါကလား သို့မဟုတ်ဤ mod ကိုအဘယျသို့အကျိုးသက်ရောက်နိုင်မည်နည်း
၎င်းသည်ဘာမှမထိခိုက်ပါ၊ ၎င်းထွက်လာသောအခါ update ကိုကျော်သွားလိမ့်မည်
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ မနေ့ကကတည်းကကြိုးစားခဲ့တာပါ။ ဟေး၊ ကြည့်ရအောင် ...
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာလားဘာမှအကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိဘူးလို့သင်ပြောရုံသာမကပဲငါကြိုးစားကြည့်ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီ၊ ဘာမှမနှေးပါနဲ့အရာအားလုံးပြီးပြည့်စုံလာတယ်။ အဆိုပါ xperia p များအတွက်အကောင်းဆုံး !!! sl0, ငါအကြံပေးလိုပါတယ်၊ အသစ်တစ်ခုကိုသင်မြင်သောအခါမျက်နှာသည်ပြောင်းလဲသွားသည်။ မကြာမီရောက်လာလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့်လုံးဝဘာမှမရှိဘူး။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
mod link ကိုချ။ ကျေးဇူးပြု၍ ဖြေရှင်းပါ
တောင်းပန်ပါတယ်၊ mod ၏ link သည်မကျပါ၊ သို့မဟုတ်ပြိုလဲပါကပြန်သွားပါပြီ၊
အဘယ်သူမျှမမိတ်ဖက်, ငါဆာဗာမရှိကြောင်းရ။ ကျေးဇူးပြုပြီးကျွန်တော့်ကိုကူညီပါ
ဒံယေလဟိုဆေး Franco Guzmánအားပြန်ကြားချက်
Bootloader ကအရေးမကြီးဘူးလား။ ဖွင့်လားတံခါးပိတ်လား။
ကျွန်ုပ်တွင် bootloader တစ်ခုပိတ်ထားပြီး၊ ကျွန်ုပ်တွင်ပြanyနာမရှိခဲ့ပါ။ ဆန့်ကျင်ဖက်အားဖြင့်အလွန်ကောင်းမွန်သော၊ အင်တာဖင့်၏ထူးခြားချက်မှာအထူးသဖြင့် floating apps များ၊ YouTube app အသေးစားနှင့် floating ဗီဒီယိုများကောင်းမွန်သော်လည်း၊ ၎င်းကို ICS0… sl4.0 ကတည်းကတပ်ဆင်နိုင်သည်
အမှားနည်းနည်းရှိတယ်။ အသိပေးချက်ဘားတွင်နာရီမရှိပါ။ ဖုန်းသော့ခတ်သောအခါအရေးပေါ်ခေါ်ဆိုမှုမရှိပါ။ သင်ခေါ်ဆိုမှုတစ်ခုလွတ်သွားသောအခါကားထဲတွင်သော့ဖွင့်သည်
ခင်ဗျားရဲ့ထင်မြင်ချက်ကိုလေးစားတယ်၊ မိတ်ဖက်ကောဘယ်လိုလဲ၊ ငါကတော့ sl0 နဲ့ srte ပြproblemနာမရှိဘူး။
Adrián, သင်ဖိုင်ကို upload နှင့်ငါ့ကို link ကိုပေးနိုင်မလား? ငါတန်ဖိုးထားလိမ့်မယ်
တစ်စုံတစ် ဦး ကဖိုင်တင်ပြီး link ကိုတင်မည်လား။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ပြီးတော့ငါ link တွေကိုမတင်နိုင်ပါ။ တက်နေပြီ၊ ငါ့ကိုဒီမှာ link တွေထားခွင့်မပြုဘူး။
ဒါက ROM လားဒါမှမဟုတ် Mod လား။
ဟယ်လို mate၊ ဒါက modpack ပါ
၎င်းသည်အာမခံကိုအကျိုးသက်ရောက်သည်မှာကျွန်ုပ်၏ xperia ကို ၂ ပတ် ၀ ယ်ပြီး၎င်းသည်အာမခံအပေါ်သက်ရောက်မှုရှိမရှိကျွန်ုပ်မသိပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အတွက်အလုပ်မလုပ်ခဲ့ပါ။ xperia လိုဂိုသည်စတင်စတင်သည်နှင့်ပြန်စတင်သည်
ကျွန်ုပ်အနေဖြင့်သိမ်းဆည်းခြင်းမပြုမိပါက mod ကိုကျွန်ုပ်မည်သို့ဖျက်ရမည်နည်း။
Xperia P အတွက်သာလား။ ငါမှာ xperia S ရှိပြီးမင်းကိုငါပေးချင်တယ်။
javi anto ပါ ဟုသူကပြောသည်
ဟေ့သူငယ်ချင်း၊ မင်းက xperia ပေါ်မှာအလုပ်လုပ်မယ်
javi anto သို့ပြန်သွားရန်
အေးမြအုတ်အိမ်ဖုန်း: L ကို
Wilson က vasquez ဟုသူကပြောသည်
ဒါပေမယ့်မသိတာက pin code ၀ င်းဒိုးကိုစောင့်ဖို့ဘာကိုဆိုလိုတာလဲလို့မေးချင်ခဲ့တယ်၊ ငါမှာ jb 4.1.1 ရှိတယ်
Wilson Vasquez အားပြန်ကြားပါ
DivX Stash, အင်တာနက်မှသီချင်းများဖြင့်ဖွင့်စရာစာရင်းများဖန်တီးပါ